ခရီးသွားများအတွက် Mini 7pcs Makeup Brush Set  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော 7pcs အလှကုန် Mini Makeup Brush Set  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Smudge Brush ပုံစံ7Piece ကိုတက်စေပါမိတ်ကပ်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထူးခြားတဲ့ဂန္ထဝင်အနက်ရောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ဖြီးထား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်သား set 7PCS သောကျောက်တို့သည်စပါးကိုမိတ်ကပ်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အတူဒြပ်ဆံပင်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တောက်ပခြင်းနှင့်မူထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းမိတ်ကပ် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသေးစားခရီးသွားအရွယ်အစားဖောင်ဒေးရှင်းသည်စုတ်တံများပါ ၀ င်သည် ဒီပန်းချီကားတစ်ချပ်သည်အရောင် ၃ မျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဆံပင်၊ သဘာဝသစ်သားလက်ကိုင်နှင့်ရွှေတောက်ပသောလူမီနီယံပြွန်များပေါင်းစပ်ထားသည်။ နေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတွက်လိုအပ်သော Professional ဒီဇိုင်း ။ သင်ကပိုင်ဆိုင်ပြီးတာနဲ့သင်ကထာဝရထာဝရချစ်လိမ့်မယ်။...
1. စုပ်ယူနိုင်မှုပိုသည်၊ troditional သုတ်ပဝါထက် ၇ ဆပိုများသည်။ ညင်သာစွာအစိုဓာတ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာ wrung ။ 2. ဝါဂွမ်းထက်ပိုအစိုင်အခဲမိုက်ကရိုဖိုင်ဘာပစ္စည်းသည်ရေကိုပိုမိုစုပ်ယူသည်။ 3. Anti- mite, ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ကုသမှု။ သင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုပို...
ရေမြှုပ်ကိုရေထဲတွင်စုပ်ပြီးသင်၏မျက်နှာပေါ်ရှိမိတ်ကပ်ကိုညင်သာစွာသုတ်ခြင်း အသုံးပြုပြီးနောက်သင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်နွေးသောရေနှင့်ဆပ်ပြာကိုသုံးနိုင်သည်။ စုပ်ယူနိုင်စွမ်း ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးကုသမှု။ သင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုပို တယ်ရီနှင့်အတူ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည်သင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်လိုင်းချန်မထားပါနှင့်၊...
၁။ အရေပြားနှင့်သင့်လျော်သော hydrophilic ပစ္စည်းများသည်မတည့်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အရေပြားအမျိုးအစားအတွက်မဆိုသင့်လျော်စေသည်။ ၂။ ချစ်ပ်များကျဆင်းခြင်းမရှိပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အမှုန့်ဖြစ်သောစေးစေးစေးစေးများကအသုံးပြုနေစဉ်အမှုန့်များကျလိမ့်မည်။ 3. အဘယ်သူမျှမအနံ့နှင့် Eco-Friendly 4. Uniform aperture...
ကာတွန်းပုံစံလေထုရေမြှုပ်ကိုစိုစွတ်။ ခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပျော့ပျောင်းသောပုံသဏ္cuteာန်ရှိပြီးမိန်းကလေး၏နှလုံးသားကိုကျေနပ်စေသည်။ သင်၌ရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်၎င်းကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ချစ်မိလိမ့်မည်။ နောက်တဖန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း အဆင့် ၁:...
Petal Brush Flat Trace ဖောင်ဒေးရှင်းမရှိပါ ဒီတစ်ခုတည်းသော Fundation စုတ်တံအစုံသည်နူးညံ့သောဒြပ်ဆံပင်များ၊ ပလက်စတစ်လက်ကိုင်များဖြစ်သည်။ Professional ဒီဇိုင်း၊ နေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတွက်လိုအပ်သောဖြီး။ သင်ကပိုင်ဆိုင်ပြီးတာနဲ့သင်ကထာဝရထာဝရချစ်လိမ့်မယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း နွေးသောရေ + ပန်းကန်ဆေးစက်ဘေးတွင်လက်ဖြင့်လက်ဆေးပါ...
မိတ်ကပ်ဖြီး မိတ်ကပ်ဖြီးထား ရေမြှုပ်ကြက်ဥ မိတ်ကပ်အိတ် အလှကုန်ဖြီး Foundation ကိုဖြီး